खातुनको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नरहोस्: राज्यमन्त्री डा यादव « Janata Samachar
खातुनको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नरहोस्: राज्यमन्त्री डा यादव
प्रकाशित मिति :9September, 2019 6:21 pm
काठमाडौं । एसिड आक्रमणमा परेकी उपचाररत मुस्कान खातुनलाई संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले खातुनको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न अस्पताललाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते वीरगञ्जकी १५ वर्षीया मुस्कानको स्वास्थ्य अवस्था बुभ्न आइतबार यादव अस्पताल पुग्नुभएको थियो । डा यादवले मुस्कानको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उनको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बाचासमेत गर्नुभएको छ ।
आक्रमणमा परेकी उपचाररत मुस्कान खातुनलाई राज्यमन्त्री डा यादव सहित प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, संघीय सांसद प्रदीप यादव र प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भेटेका छन् ।
स्कुल हिँडेकी खातुनमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । वीरगंज महानगरपालिका–२ छपकैया घर भएकी त्रिभुवन हनुमान माध्यमिक विद्यालय रेसम कोठीमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत् मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । एसिड प्रहारबाट घाइते भएकी बालिकालाई उपचारका लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज लगिएकोमा थप उपचारको लागि कीर्तिपुर अस्पताल रिफर गरिएको थियो । हाल उनको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । एसिड आक्रमण परेकी खातुनको अनुहार पेट, पाखुरा, मुख र छातीमा समस्या देखिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–६ गणेशमान चोकमा सम्साद मिया र सोही महानगरपालिका–२ छप्कैया बस्ने माजिद आलमले कक्षा ९ मा अध्ययनरत किशोरीलाई एसिड प्रहार गरेका थिए । एसिड प्रहार गर्नेमध्ये १६ वर्षीय सम्साद मियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको पर्सा प्रहरीका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले बताए । अर्का एकजना माजिद आलमको खोजी कार्य जारी छ ।
प्रेम सम्बन्धका कारण एसिड प्रहार भएको हुनसक्ने बताइएको छ । यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
राज्यमन्त्री डा. यादव
४८ वर्षीय महिला बलात्कृत, थारु पक्राउ
रुपन्देही । ४८ वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
अनाथ बालबालिकालाई जग्गा लिलामिको पत्र, नेता यादवले गरे आर्थिक सहयोग
सर्लाही । सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ (ख) का प्रदेश सभा सदस्य समाजवादी पार्टीका नेता संजय
सप्तरी। बिसनपुर – बोदे बरसाइनमा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार
४० वर्षीया महिला बलात्कृत, महतो पक्राउ
धनुषा । ४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।